Wasiir Labaad Oo Ka Tirsanaa Xukuumaddii Hore Ee Axmed Siilaanyo Oo Beero-Qode Noqday Kana Hadlay Sababta Uu Shaqadaasi U Doortay | FooreNews
Home wararka Wasiir Labaad Oo Ka Tirsanaa Xukuumaddii Hore Ee Axmed Siilaanyo Oo Beero-Qode Noqday Kana Hadlay Sababta Uu Shaqadaasi U Doortay
Gabiley, February 10, 2018- (Foore)- Wasiirkii hore ee Wasaaradda Warshadaha Somaliland ee xukuumaddii Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Md. Sucayb Maxamed Muuse ayaa noqday Qofkii labaad ee Golaha Wasiirradii Siilaanyo ka tirsan ee noqday nin u dhaqaaqa dhinaca tacabka wax soo saarka isaga oo noqday beero qode xoogsada isaga oo beer uu ku leeyahay Gobolka Gabiley ka sameeyey wax soo saar dhinaca dalagga beeraha ah.
Wasiir Shucayb ayaa Deegaanka Magaalo Xayd oo qiyaas ahaan Magaalada Gabiley u jirta 20km ka beertay dalagyo kala duwan oo uu ka mid yahay Hadhuudhku.
Qaar ka mid ah wariyayaasha ka hawl gala Gobolka Gabilay oo booqasho ugu tagay Wasiirkii hore ayaa waxa uu uga sheekeeyey waxa ku kallifay in uu beero-qode noqdo waxaanu Mudane Shucayb yidhi: “Qodaalku waa wixii aan ka dhaxalnay aabbayashayo ee dhaqankeenu ahaa. Anigu waxaan dhaqan u lahaa in aan beeraha beerto illaa muddo dhawr iyo sagaashankii illaa maanta. Dalagga noocyadiisa kala duwan ayaannu beernaa haddii ay tahay Hadhuudhkii oo aannu maanta tumayno oo soo go’ay iyo kuwaa kale ee dhinacyada innaga xiga oo imika shaqadoodu socoto. Dhawr iyo sagaashamaadkii illaa maanta mar aan beer qodida ka joogsaday ma jirto. Sidaasaan beeraha u qodan jiray. Wax la isticmaalo waxa ugu wanaagsan waxa aad beerato. Ninkii hadhuudh doonaya iyo ninkii Gallay doonaya waan u haynaa. Waa cunto cuntooyinka kale ka wax tar badan oo imika aad ogtihiin sida dhakhaatiirtu innoogu waaninayaan in aan cunno oo aan iska dayno waxan kale ee aan tayada lahayn. Ninkii doonaya Digir iyana waan beeranay oo way noo taallaa. Heeddii ayaannu iyana beernay oo taalla, shan wax soo saar oo kala duwan ayaa beerta ku yaalla. Dadkeenii waxa ay sugayaan uun cunto dibadda laga keenay. Waa in aan qaadanaa siyaasaddii Madaxweynaha ee isku filnaanshaha dhinaca cuntada ayaa loo baahan yahay”.
“Waynagii dhisnay Madaxweynaheena Muuse Biixi Cabdi oo xisbiga KULMIYE ka soo baxay. Marna shaqada qaranka ayaad haysaa oo aad umadda u haysaa marna waxa aad u gacan bannaanaanaysaa hawlahaaga kale ee gaarka ah ee aad marka horeba ku jirtay. Runtii xilku aad iyo aadbuu u culus yahay oo marka xil laguu dhiibo waa wax adag. Jaanis badan umaan heli jirin hawlahaygan. Ka war hayn guud mooyee sidan umaan dhex gali jirin. Ushan aan gacanta ku hayaa waa usha lagu tumo hadhuudhka. Waxaan soo celinaynaa dhaqankeenii ahaa in aad gacantaada wax kula soo baxdo. Madaxweynaheenuna waxa uu dhiirri geliyey wax soo saarka. Siyaasadda waan ku jiraynaa ganacsiga iyo beerahana waan qodanaynaa” ayuu yidhi Shucayb Maxamed Muuse.
Wasiir Shucayb ayaa noqonaya qofkii labaad ee ka tirsanaa Golihii Wasiirrada ee xukuumaddii Madaxweyne Siilaanyo ee u dhaqaaqa tacabka beeraha iyo wax soo saarka waxaana dhawaan isna warbaahinta ka soo baxay wasiirkii hore ee Ganacsiga Cumar Shucayb Maxamed oo isna beer ku taalla Gobolka Saaxil wax soo saar ka samaynayay.
Previous PostMilicsiga Taariikhda Faneed Ee Cabdi Cali Bacalwaan: Mid Ka Mid Ah Fannaan- iintii Loogu Jeclaa Hoballada Waaberi - Q:2aad Next PostCali Khaliif Oo Is Barbar Dhig Ku Sameeyey Wixii Ay Dhismaha Maamulka Khaatumo Ka Aaminsanaayeen Madaxweyne Siilaanyo Iyo Cabdiraxmaan Faroole